Yintoni iNyaniso eyiyo? | Martech Zone
Ukukhawuleziswa kwetekhnoloji kukuthatha umoya. Ukuba ubuza kundibuza uluvo lwam malunga nenyani ebonakalayo kunyaka ophelileyo, ngekhe ndikuxelele ukuba inethuba elilinganiselweyo kwezemfundo nakwezolonwabo. Nangona kunjalo, njengoko benditshilo kwiposti yamva nje emva kokuzimasa Ihlabathi leTekhnoloji yeDell, Ukubona inguqu yedijithali eyenzekayo kwihlabathi itshintsha indlela endijonga ngayo malunga nayo yonke into.
Inyaniso yokwenyani (i-VR) ngamava okuntywiliselwa apho imo yomsebenzisi ebonakalayo kunye nengqondo evakalayo ithathelwa indawo ngamava enziwe. Ukuchukumisa izixhobo ze-haptic kungongezwa, ukuvumba ngevumba, kunye nobushushu nako kunokuphuculwa. Injongo kukuba ithatha indawo Umhlaba okhoyo kwaye umsebenzisi ukholelwa ukuba bakwimeko yokulinganisa eyenziweyo eyenziwe ngezi zixhobo.
Unikezelo luyenzeka ngoncedo lobukrelekrele bokufakelwa - iinkqubo zinokufunda ukuzalisa izikhewu ezingakhange zichukunyiswe sisakhelo sophuhliso. Ndabelana ngebali elimangalisayo apho McLaren Ukulinganisa bekuchanekileyo kangangokuba uqikelelo olwenziwe ziimodeli zabo zichanekile kangangokuba bezisetyenziselwa ukulungisa kunye nokulungisa iimoto zomdyarho. Iyamangalisa ngokuqinisekileyo… inyani ebonakalayo iqikelela ubunyani bokwenyani. Ngubani.
Indawo epheleleyo iphandiwe kwaye yaphuhliswa yinyani eyiyo kwaye yavelisa oku kulandelayo. I-Fullestop igxile kuyilo lwesiko lewebhu kunye nophuhliso kwihlabathi liphela. Uyilo oluLungiselelweyo lweshishini kunye neemfuno ezizodwa. I-infographic ibonelela apho i-VR yasetyenziswa khona kumathuba okuthengisa kunye neziphumo ezibalaseleyo:
Marriott banikezela ngenkonzo yegumbi leVR ngeeVC postcards, ezichaphazela inani labantu abathi banqwenela ukuhlala kwiihotele zaseMarriott ngakumbi.
Indawo oya kuyo iBritish Columbia idale amava eVR kwiGreat Bear Rainforest ekhokelela kunyuko lwe-5% kubakhenkethi.
UThomas Cook wanikezela ngeempukane zeVR zeManhattan Skyline kukhokelela ekunyukeni kwe-190% kukhenketho lwe-NYC kunye ne-40% yokubuya kutyalo-mali.
Ayizukucothisa, nayo. Ukuchitha imali kwiVR kunokufikelela kwi- $ 7 yezigidigidi kulo nyaka phakathi kwehardware kunye nesoftware kwaye inokukhula iye kwi-30 yeebhiliyoni zeedola ngo-2020. Oculus Rift ikalwe enye yezona zibalaseleyo. Ndijonge xa ​​intombi yam idlala imidlalo eliqela nenkqubo ye-Oculus Rift edityaniswe ne Inkqubo yeAlienware yendawo 51 kwaye kwakumangalisa ukubona ukuba wakhawuleza wangena njani kumava.
Jonga i-infographic eneenkcukacha zamanye amashishini kunye namathuba okwenyani kwenyani. Kuya kuba mnandi!
tags: alienwareIndawo ye-Alien 51Indawo ekuyiwa kuyo british columbia vrIhlathi elikhulu leebhere brimanhattan vrIntengiso vrImarriott vri-oculus riftUtomas upheka vrndiphilavr intengiso
Ngaba Ngokwenene UnguMcebisi ngezeNtlalo?
I-Templafy: Ulawulo kunye neMveliso kuwo onke amaXwebhu, iiNtetho kunye nee-imeyile